Ogaden News Agency (ONA) – Wasaarada Dibada Ee Itoobiya oo Xubno Eedaysnaa Cafiday.
Wasaarada Dibada Ee Itoobiya oo Xubno Eedaysnaa Cafiday.
Hadal qoraal ah oo kasoo baxay Wasaarada Gaashaandhiga Gumaysiga Itoobiya ayaa lagu sheegay in ay cafis ufidiyeen dhamaan dadkii lagu soo eedeeyay in ay fadqalalo kadhex wadaan wadanka Gumaysiga Itoobiya, waxayna wasaaradu sheegtay in ciidankii la soo eedeeyay ay shaqooyinkoodii kusoo laaban karaan.
Cafiskan ay bixisay Wasaarada Gaashaandhiga ee Itoobiya ayaa daba socda cafis guud oo uu bixiyay Raysalwasaaraha cusub ee Gumaysiga Itoobiya Abiye Axmed, kaas oo dhamaan ururada kukacsan xukuumada Itoobiya iyo shalhsiyaadka la eedeeyayba ugu baaqay cafis iyo in ay kaqaybqaataan waxa uu ugu yeedhay hormarka wadanka.
Jabhada Ginbot 7 oo kamid ahayd ururadii nabada loogu baaqay ayaa iyadu durba aqbashay hadalkii kasoo baxay Abiye Axmed wuxuuna gudoomiyaha Jabhadu sheegay in ay kawardhowrayaan hogaanka cusub ee wadanka Gumaysiga Itoobiya uu yeeshay, wuxuuna gudoomiyaha Jabhada Ginbot 7 Pro. Birhanu Naga sheegay in hogaamintii hore ee Itoobiya uu dhaamo.
Sidoo kale gudoomiye kuxigeenka Jabhada Ginbot 7 ayaa sheegay in wadanka Itoobiya uu kabadbaaday burbur wuxuuna intaas kudaray in ay mudo dheer karsaaraayeen cadaab, waana sababta dagaalka keentay ayuu yidhi.
Dadka arimaha Itoobiya darsa ayaa aad uga rajo xun sidii ay usii socon lahaa isbadalka lasheegay in uu Itoobiya kabilowday waxayna khuburadu sheegayaan in dhaqanka Itoobiya uusan saamaxaynin wadada uu hayo Raysalwasaaraha cusub ee dhawaan kacdoonka shacabka kuyimid kaas oo sheegay in uu wac badali doono.